Krita 4.4.5 inosvika senge yekupedzisira gadziriso vhezheni isati ya v5.0 | Linux Vakapindwa muropa
Krita 4.4.5 anosvika achisvetuka vhezheni seyekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa pamberi pekusunungurwa kukuru kunotevera
pablinux | | Noticias, Free Software
Papfuura mwedzi miviri yapfuura ivo vakatipa iyo v4.4.3 yeiyo software inogadzirwa uye uye yekatuni. Tichifunga nezvekuverenga, chero munhu angadai akatarisira kuti inotevera inovandudzwa kuve v4.4.4, kunze kwekunge ivo vaitevera chirongwa ichi uye vachiziva kuti hapana yakadaro vhezheni. Muchokwadi, hongu, iriko, asi muchokwadi haisi chinhu chinopfuura v4.4.3 iyo yakaiswa muchitoro cheEpic. Naizvozvo, KDE yaburitsa nhasi Krita 4.4.5.
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, Chiri yazvino kugadzirisa kugadzirisa bugs pamberi peKrita 5.0, uye yakawanda yekukanganisa kwavakaburitsa iri nekuda kweinotsamwisa bug yaive mune vhezheni ye macOS. Iyo KDE chirongwa chiri kutoshanda pane inotevera inotevera yekuvandudza, asi zvinogona kutora chinguva uye ivo vaisada kusiya Apple varidzi vemakomputa mumheremhere.
Krita 4.4.5 yakakwira
Kune ese nhau, zvakafanira kuverenga iyo yekuburitsa noti. Pakazara, zvigadziriso makumi manomwe nezvitanhatu zvakaunzwa, pakati peizvi zvinotevera kumira:
OpenGL ES inotsigira ARM paLinux.
Yakagadziriswa tsaona yakaitika muparlet popup painenge ichikura pa125%.
Yakagadziriswa tsaona neiyo yekushandisa yekushandisa.
Yakabvisa iyo JPG fomati kubva pane runyorwa rweanotsigirwa mafomati emifananidzo eiyo clipboard.
Yakagadziriswa nekukurumidza kuona jenareta.
Yakagadzirisa tsaona yakaitika pakutenga yakaputsika ICC mbiri.
Yakavandudza shanduko yekushandisa kushandisa pivot.
Yakagadzirisa huori hwe data kana uchimanikidza Ctrl + Z apo chiito chekucheka chichiita.
Yakagadziriswa palette zoom mune yekuzadza chishandiso.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweGCC 11.
Zvimwe zvakawanda zvinogadziriswa.
Krita 4.4.5 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva ku peji rekurodha peji. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi yavo AppImage, asi ivo zvakare vanotipa isu repository yeUbuntu neGento. Mumaawa mashoma anotevera ivo zvakare vanoisa idzva vhezheni kuFlathub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 4.4.5 anosvika achisvetuka vhezheni seyekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa pamberi pekusunungurwa kukuru kunotevera
LibreOffice 7.1.4 inogadzirisa yakatenderedza 80 bugs, 20% yekuvandudza kuenderana neMS Office
AMD FidelityFX Super Resolution yakavhurwa sosi